मेला – Page2– Pahilo Page
अर्जुनमिलन बनेर ‘अतीत’ फर्काउँदै डा. भीमार्जुन आचार्य
काठमाडौं, १९ चैत । अर्जुनमिलन उपनाममा गीत गाउने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अब ‘अतीत’ फर्किँदैछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको चर्चित नामले ओझेल पारेको अर्जुनमिलन पनि अब उत्तिकै स्थापित भएको छ । उनै डा. भीमार्जुन अर्थात अर्जुनमिलन स्रोतामाझ गजल एल्बम लिएर आउँदैछन् । यही चैत २३ गते शनिवारका दिन १ बजे सर्...
काठमाडौं, १४ चैत । चलचित्र कालो वर्षको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । वैशाख १३ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको गीत वुधबार सार्वजनिक भएको हो । चलचित्रको निर्माण पक्षले ‘यस्तो साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा अन्जु पन्त र विशाल निरौलाले स्वर दिएका छन् । गीतको शब्द रचना खेम सारु मगरले गरेका हुन् भने संगीत प...
कञ्चनपुर, १२ चैत । कन्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको राना थारूहरुको होली मिलन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी खानेपानी मन्त्री बिना मगरले लगाउनु भएको पहिरन देख्दा धेरै जना छक्क परे । खानेपानी मन्त्रीको यो पहिरनमा राना थारुहरुको संस्कृति र पहिचान झल्किएको देखिन्थ्यो । अल्पसंख्यक राना थारू ...
हल्का फेशन गर्ने प्रमिलाले कसलाई भनिन्, ओ झिल्के (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ९ चैत । गायिका तथा मोडल प्रमिला तामाङले आफ्नो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । ‘लाहुरेकी छोरी’ शीर्षकको गीतको म्युजिक भिडियो लोकप्रिय बन्दै गएको छ । हल्का फेसन गरी हिँड्छु लाहुरेकी छोरी नठान फसाउँछु भन्ने दाउँले भो मलाई साइड न हान ओ झिल्के ओ झिल्के true love बहाना अर्कै होला तिम्र...
कठमाडौं, ९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रशंसा गरेका छन् । “व्यस्त दैनिकीबाट समय निकालेर झलनाथजीले यति राम्रो सिर्जना गर्नुभएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “उहाँको सिर्जनशीलता धेरैजनाको लागि यो प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ ।” गीतकार एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गीतिएल...
काठमाडौं, ५ चैत । रोल्पा नगरपालिकाका मेयर नै ‘खेलाडी हौं हामी खेलाडी’ भन्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । यद्यपि उनी भौतिकरुपमा भने त्यसरी मैदानमा उत्रिएका होइनन् । साहित्यकार तथा गीतकार समेत रहेका रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी अर्थात पुरण क्षेत्रीको खेलाडी गीत ‘खेलाडी हौं हामी खेलाडी’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक ग...
दिव्या राईको ‘परदेशी’ विमोचन, बिक्रीको आधा भाग मिर्गौला पीडितलाई
काठमाडौं, १ चैत्र । दिव्या राईको नयाँ एल्बम ‘परदेशी’ विमोचन गरिएको छ । उक्त एल्बममा नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति रहेको राईको भनाई छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच क्लबका सभापति ऋषि धमलाले उक्त एल्बमको विमोचन गरेका हुन् । एल्बम विदेशिएका नेपालीहरुको पीडा र आफ्नो देशप्र...
एयरपोर्टमा श्रमिकको झिटिझाम्टो जफत भएपछि रेखाले भेटिन् मन्त्री (ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, १ फागुन । विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपाली श्रमिकहरुको झिटिझाम्टो पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत हुन थालेको समाचार आएपछि आक्रोशित बनेकी नायिका रेखा थापाले रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेकी छन् । नायिका थापाले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुले ल्याए...
काठमाडौं, ८ माघ । नेपाली कथानक चलचित्र ‘ब्रेक अप’ को रोमाञ्चक दृश्यसहितको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । ‘ब्रेक अप’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको १ दिनभित्रै युट्युब च्यानलमा ट्रेण्डिङको १०औं स्थान चुम्न सफल भइसकेको छ । चर्चित तथा कुशल निर्देशक हेमराज बीसीले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘ब्रेक अप’ को ट्रेलरमा प्रेम र रोमान्सलाई प्...
काठमाडौं, २ माघ । फेरिएको परिवेशमा पोखराका महिलाहरुले यौन सन्तुष्टि पूरा गर्ने नयाँ तरिका अपनाएका छन् । श्रीमान विदेश गएको र अविवाहित युवा समेत विदेशतिर लागेपछि यहाँका महिलाहरुले यौनसुख प्राप्त गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन थालेका हुन् । पोखराका महिला तथा युवतीहरुले अपनाएको त्यो तरिका बिल्कुलै नयाँ भने होइन । उनीहरु सेक्स...